Tirada lacagta kasoo xarootay Diiwaan galinta Musharaxiinta G/Golaha Shacabka – idalenews.com
Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo lagu wado in la doorto 30-ka bishan waxaa isku soo sharaxay 11-Musharax , Musharaxiinta ayaana dhamaantood isku diiwaan galiyay in doorashadaasi ka qeyb galaan.
Guddiga Doorashada Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa musharax kasta oo u tartamayo kursiga Gudoomiyaha Golaha Shacabka waxa ay ka qaadeen lacag dhan 15-Kun oo Dollar, waxaana isku geynta lacagtaasi noqoneysa 165-kun oo Dollar.
Lacagta ay bixiyeen Musharaxiinta u taagan xilka Gudoomiyaha golaha Shacabka ayaa lagu shubay akoon uu bangiga dhaxe ku leeyahay Baarlamaanka, lamana shaacin lacagtaasi waxa lagu qaban doono.
Waxaa horey u jiray lacago aad u badan oo Malaayiin dollar ah oo laga qaaday Musharaxiintii Baarlamaanka labada Aqal iyo Gudoonkooda iyo sidoo kale Musharaxiintii u tartameysay xilka Madaxweynaha.
Lacagahaasi tirada badnaa ee kasoo xarooday Doorashooyinkii dalka ka dhacay ayaa intooda badan la ogeyn halka ay ka baxeen, mana jirto ilaa hada cid dabagal ku sameysay lacagahaasi oo laga qaaday Musharaxiin.
Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in dagaal kula jirto Musuq maasuqa ayaan inta badan dabagal ku sameyn lacaga iyo waxyaabaha kale ee la musuq maasuqo, inkastoo ay xusid mudan tahay in uu hada sii yaraanayo Musuq maasuqii dalka horey uga jiray.